Kedu ihe kpatara ndị ọrụ dị ukwuu ji ahapụ? Gịnị kpatara nnukwu ụlọ ọrụ ga-ewe n'ọrụ? | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 17, 2006 Wednesday, October 29, 2014 Douglas Karr
N'ime afọ iri gara aga, enwere m obi ụtọ ịrụ ọrụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ m kacha atụ bụ Landmark Communications. Ndị ọrụ Corporate na Landmark nyere ndị ọrụ ike ịzụlite onwe ha dị ka obere ma ọ bụ ntakịrị ihe ha chọrọ. Companylọ ọrụ ahụ mere nke a n’atụghị ụjọ ego ha ga-etinye na ndị ọrụ nwere ike ịla n’iyi. Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ chere na ọ bụ ihe ọghọm B to ịzụlite ndị ọrụ ha karịa ịzụlite ha ma hapụ ha.
Nsonaazụ dị na Ngalaba Mmepụta bụ ihe ịtụnanya na afọ 7 m rụrụ ọrụ ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ ahụ na-agba mgba, ngalaba anyị belata ego, ụgwọ ọnwa, mmụba arụ ọrụ, na belata mkpofu kwa afọ m na-arụ ọrụ ebe ahụ. Arụrụ m ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọzọ nke na-ekwenyeghị na ma ọ bụ kwụọ ụgwọ mmepe ọkachamara. Companylọ ọrụ ahụ nọ n’ọgba aghara ugbu a, ebe ndị ọrụ na-ahapụ aka ekpe na aka nri. M rụkwara ọrụ maka ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eto eto nwere nnukwu uto na ikike.
Otu nchọpụta nke m megoro kemgbe ọtụtụ afọ bụ ihe ịma aka siri ike nke idebe ndị ọrụ were ọdịnaya ha na iweta onyinye ọhụụ mgbe ọ dị mkpa. Ihe ngbanwe gbanwere oge na nka nke ndị ọrụ dị ukwuu, nka ụlọ ọrụ chọrọ, yana nka onye ọrụ ọ bụla.
Ihe osise dị n'okpuru bụ ụzọ m si egosipụta nke a. Ndị ọrụ dị ukwuu na-etolite n'oge ije nke ụlọ ọrụ ahụ wee malite ịmalite karịa ụlọ ọrụ ahụ. Nke a na - eweta ọdịiche (A) na mkpa nke onye ọrụ yana ihe ụlọ ọrụ nwere ike inye. Ọtụtụ mgbe, nke a na-eduga onye ọrụ na mkpebi, "M kwesịrị ịnọ ma ọ bụ ka m gaa?". Ọ na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ ohere iji jupụta, na nnukwu mfu. Cheta, ndị a bụ superstars nke ụlọ ọrụ.
Mana enwere oghere ọzọ (B), mkpa ụlọ ọrụ na ihe onye ọrụ ọ bụla nwere ike iweta. Ndị ụlọ ọrụ na-enwe ọganiihu na-ejikarị usoro ọrụ nke ndị ọrụ ha eme ihe. Ndị ọrụ ndị dị mkpa ịmalite nnukwu ụlọ ọrụ anaghị abụkarị ndị ọrụ achọrọ iji kwado uto ahụ ma ọ bụ gbanwee ya. N'ihi ya, enwere ọdịiche na talent. Ejikọtara ya na ọpụpụ nke nnukwu ndị ọrụ, nke a nwere ike ibute oke mpe na talent.
Nke a bụ ihe kpatara na ụlọ ọrụ ga-etinye ihe ize ndụ iji nọgide na-emepe ndị ọrụ ga-emeghe ya, yana ịchọta ndị ọrụ ka mma. Ha ga-emerịrị oghere ndị ahụ. Nkezi ndị ọrụ enweghị ike ịme nke a. Companylọ ọrụ ahụ aghaghị ịchọ ebe ọzọ maka talent na ọkwa niile. Nke a, n’aka nke ya, na-eweta iwe. Nkezi ndị ọrụ na-ewe iwe n'ọrụ ndị ọrụ ka mma.
Ọ bụ naanị echiche, mana ekwenyere m na ogologo oge ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ibe ha, onye njikwa na-echekarị na adịghị ike ndị ọrụ ha karịa ike ha. Ọbụna nnukwu onye ọrụ ahụ ya na microscope maka nkà ndị ahụ, a gwara ha, chọrọ mmelite. Njehie kachasị njọ nke ụlọ ọrụ nwere ike ime bụ ịnakọta talent mgbe ha, n'amaghị ama nwere ikike dị ukwuu n'okpuru imi ha. Ilekwasị anya n'adịghị ike nke ndị ọrụ dị ukwuu ga-enyere aka na mkpebi onwe ha ga-eme iji nọrọ ma ọ bụ gaa.
Yabụ, ibu ọrụ nke onye ndu buru ibu siri ike, mana ijikwa ya. Ikwesiri itinye uche na ike ndị ọrụ, ọ bụghị adịghị ike, iji tụọ ikike nke onye ọrụ. Ga-emerịrịrịrị na ị kwụghachi ụgwọ ma kwalite ndị ọrụ dị ukwuu. Ikwesiri igba mbọ hụ na ị were ikike dị ukwuu na nzukọ iji mejupụta oghere ndị ahụ. Ga-etinye ihe egwu na ịzụlite nnukwu ndị ọrụ - ọbụlagodi na ị nwere ike tufuo ha. Nhọrọ ọzọ bụ na ị hụ na ha ga-aga.
Ọ bụ nzukọ dị egwu na onye ndu dị egwu nke nwere ike iji nlezianya dozie oghere ndị a ma jikwaa ha nke ọma. Ahụtụbeghị m ya ka o mere nke ọma, mana ahụla m na ọ mere nke ọma. Ekwenyesiri m ike na ọ bụ àgwà nke nnukwu nzukọ na ndị isi.
Billy Onye na - ede blọgụ
Nov 18, 2006 na 7:31 AM
Ekwenyere m na ị meela ụfọdụ nkwupụta dị ukwuu ma m ga-agbakwunye na n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, a na-ejikarị ndị ọrụ kachasị ukwuu eme ihe mgbe ndị ọrụ pere mpe na-ahapụ ha ka ha nwee ike iji skate nke na-eduga na iwe ọkụ na afọ ojuju na ihe ha kwenyeburu ịbụ nnukwu ọrụ.
Jenụwarị 12, 2007 na 5:39 PM
Akwa isiokwu! Doevetails dị mma nke nwere amamihe sitere na “Akpa Mwepu Iwu niile”. Emere nke ọma - daalụ!
Mbụ Agbaji Iwu niile bụ ọkacha mmasị m akwụkwọ na-edu ndú!